आन्दोलन चर्किएको ठाउँ धनुषाका एक शिक्षकको मार्मिक अनुभूति – MySansar
आन्दोलन चर्किएको ठाउँ धनुषाका एक शिक्षकको मार्मिक अनुभूति
Posted on December 11, 2015 by mysansar
(टिच फर नेपालका फेलोको रुपमा धनुषाको विद्यालयमा अध्यापन गरिरहेका एक शिक्षक नारायण अधिकारी आफ्नो अनुभव यसरी पोख्छन्)
बिहानको सात बजे कक्षा सुरु भएको घण्टी बज्छ । घण्टी बजाउन रामसिकिल दाइ बिरलै सम्झनु हुन्छ। मेरो पहिलो घण्टी कक्षा दशमा अनिवार्य गणित।करिब १०-१५ जना विद्यार्थी आईपुगेका हुन्छन् । यो बर्ष यो बिद्यालय बाट नियमित तर्फ ८९ जनाले आउँदै गरेको एस.एल.सि को परिक्षा फारम भरेका छन् । म जिल्ल पर्छु, यत्ति विद्यार्थीलाई पढाउने कि पर्खिने ! आँखाहरु विद्यार्थी आउने बाटोतर्फ पुर्याउँछु । डम्म हुस्सुमा बेजोडले शितलहर चल्दै छ ।म शुन्य सोचमा पुग्छु । एक्कासि ढोकामा माधवी आएर सोध्छिन् -“दाइ म हजुरको क्लास अब्जर्ब गरौं?”
उनको कक्षा ९ मा पहिलो घण्टी अङ्ग्रेजी हो । “के भयो र तपाईंको क्लास ?” मैले प्रतिप्रश्न गरेँ । “मेरो मा कोहि पनि विद्यार्थी आएका छैनन्।” उनको आवाज बडो बिस्मयपुर्ण थियो ।
“बस्नुस् न त्यसो भए”
मैले “चक्रीय ब्याज” पढाउन सुरु गरेँ ।
विद्यार्थी आउने क्रम जारी रहिरह्यो। “माइ कमिन सर?”………..माइ कमिन सर ?…….”
सुरुमा भुकम्प, त्यसपछि बर्षाको बिदा र लगत्तै लामो बन्दले यो बर्ष खासै पढाई राम्रो भएकै छैन। बल्ल खुलेको स्कुल, बिहानीमा मात्र खुल्छ, त्यो पनि यो शीतलहरको बेला । “नखाउँ भने दिन भरिको सिकार, खाउँ भने कान्छा बाबुको अनुहार” भनेझैं भएको छ ।
आजको पाठ योजना बिफल हुने देखेपछी, पढाउन छोडेर एक छिन् ठुलो – ठुलो आदर्शको भाषण दिएँ। एस.एल. सि को महत्त्व भट्याएँ र विद्यार्थीको अल्छिपना प्रती गुनासो गरेँ, अनि चेतावनी पनि दिएँ -“भोलि देखि घण्टी लाग्दा नआइपुग्ने विद्यार्थीले कक्षामा प्रवेश पाउँदैन”।
मधेस आन्दोलन अझै जारी छ । पहिले विद्यार्थीहरु मलाई देखेपछी “प्रणाम सर” भन्थे । अहिले धेरैले देख्नेबित्तिकै “जय मधेस सर” भन्छन् । यो आन्दोलनको निष्कर्ष के हुन्छ मलाई थाहा छैन तर हरेक तह र तप्कामा यसको दुरगामी प्रभाव रहिरहनेछ, यो मेरो आफ्नै बुझाई प्रतिको बिश्वास हो। आन्दोलनकै कारणले निम्त्याएको बिहानी कक्षा र यसले भोग्न बाध्य पारेको मर्महरु न कसैले बुझ्छ न त कसैले बुझाउन नै सक्छ !
“सर केबारी(ढोका) बन्द गर, जाडो लागिरहेछ”
एउटा विद्यार्थीले भन्यो। मैले “तिमी” भनेको सुनेर उनिहरुले मलाई “तिमी” नै भन्न जाने । आजकल म “तपाईं” भन्छु, उनिहरु पनि सिक्दै छन् । मैथिली मात्रै जान्ने यी केटाकेटी भेटेपछी म आफुलाई “उत्कृष्ट” सम्झने तन्नेरी “केही नजान्ने” भएर शुन्यमा झरेको थिएँ । आजकल अलि अलि सिक्दै छु कि जस्तो लाग्छ। एउटा ठुलो हुल अगाडि उभिएर कसैलाई केही बुझाउन नसक्दा, सबैले त्यस्तै महसुस गर्लान् वा नगर्लान् कम्तिमा मैले चाहिँ गरेँ ।
मैले ढोका बन्द गरेँ , उसले आफैंले खिट्की (झ्याल) बन्द गर्‍यो । अब अन्धकार…. , कसरी पढ्ने ?
म निस्केर कक्षा ७ मा जाँदै थिएँ, एउटा विद्यार्थी दौडदै आएर सोध्यो – ” म घर जान्छु, पेट दुखिसक्यो भोकले “। उ पेट मिचिरहेको थियो । म आफैंलाई यस्तो भोकको महसुस भैरहेको थियो कि म विद्यार्थी भैदिएको भए भागिदिन्थेँ । पदिय मर्यादाको पालना गर्दा यति सुन्दर प्राकृतिक पन पनि गुमाउनु पर्दो रहेछ । मैले आफ्नै भोक देखाएर उसलाई सम्झाएँ। के को बिश्वास ले हो कुन्नि उनिहरु मैले भनेको मान्छन् ।
एउटा मा.बि.स्कुल सन्चालन शैली हेर्दा लाग्छ, यत्तिको संग त खहरे खोला बाट टिपेर ल्याएको गुह्य ढुङ्गाको मुर्तिले पनि चलाईदिन्छ। मैले यति अपमानजनक शब्द गहिरो सोच र विवेकपुर्ण विश्लेषण बाट मात्र प्रयोग गरिन, यसमा मेरो लगावयुक्त अनुभव पनि छ ।
यो कल्पनामा बगेको शब्द लहरी होइन । बिद्यालय सन्चालित हुने प्रशासनको ढाँचामा भएको याबत बिषयबस्तुको बारेमा म राम्रोसंग बहस गर्न तयार छु। हो म आजित भैसकेँ तर हार्न जान्ने प्रा‍णी म हुँदै होइन । इमान्दारीता माथिको बर्बर अन्याय मेरो सङ्घर्षको मुख्य निशाना हो। म कुनै हालतमा पनि छोड्दिन ।
म बिहान ११:३० सम्म स्कुलमै हुन्छु र दिउँसोको ३:०० बजे फेरि स्कुल मै पुग्छु, निशुल्क थप कक्षा पढाउन, परिक्षाको लागि तयारी गराउनु पर्ने छ ।खाना र आराम भन्दा बढी मलाई कर्तब्य प्रतिको प्रेम र प्राप्ति छ । म यो प्रमाणित गर्न चाहन्छु कि “सिक्ने किताब मात्र होइन, जिन्दगी जिउने शैली पनि हो, प्राप्ति एउटा सर्टिफिकेट मात्र होइन, असल आचरण र व्यबहार पनि हो।”
म सपना देखेर हिंड्छु भलै कहिँ नपुगुँ, म सत्यता टेकेर हिंड्छु, भलै सफलता नभेटुं ।
[नेपालका प्रतिभाशाली उत्कृष्ट ट्यालेन्टहरुलाई रिक्रुट गरी सार्वजनिक विद्यालयहरुमा दुई वर्षका लागि पढाउन लगाउने अभियानमा लागेको टिच फर नेपाल संस्थाको बारेमा थप जानकारी यो पुरानो ब्लगमा छ। यहाँ क्लिक गरी पढ्नुस्।
3 thoughts on “आन्दोलन चर्किएको ठाउँ धनुषाका एक शिक्षकको मार्मिक अनुभूति”
नारायण अधिकारी ज्यु को कर्म र सोचाईलाइ मेरो सलाम छ । सक्दो गर्दै जानु होला, तपाईं आफैं धेरै टाढा नपुगेपनि अरु यात्रीको प्रेरणाको स्रोत हुनुभएको छ, यसमा गर्ब गर्नु होला । जाँदा जाँदै मेरो धन्यबाद पन् स्विकार्नोस् ।
नेपाली नेताहरुको गैर जिम्मेवारीपनले गर्दा तराई-मधेशका जनताहरुको जनजीवन अस्त ब्यस्त भएको छ| मधेसी नेताहरु र सरकारको यस्तो गैर जिम्मेवारीपन कहिले सम्म?
अहिलेको अबस्थाको निमित मधेसी नेताहरु र यौटा सरकार दुइटा सरकारहरु जिम्मेवार छन्/ मधेसी नेताहरुले म नेपाली हामि नेपाली नभन्नु, नेपाल भित्र मधेश खोज्नेले पहाड हिमाल सिट होइन बिहारी सिट रोटि-बेटीको सम्भंद भयको भन्नु र मधेसी हारे भारत हार्छ भन्नुनै उनीहरुको ठुलो गैर जिम्मेवारी नियत हो/ रोटि-बेटी बिहारी को खोज्ने कुर्सि र भुमि नेपालको खोज्ने तेस्तै गैर जिम्मेवारी प्रवितिका मधेसी नेता बनेको र उनीहरुले मधेसी हारे भारत हार्छ समेत भन्नु बात अहिले मधेसी भनेका बिहारी नै हुन् कि जस्तै देखियो/ तेस्तैलाइ भारतले सघायाको कारणले अहिले को अबस्था आयो/ भारत आफै ५५० भन्दा बढी मध्यदेस अर्थात मधेसहरु गाभेर बनेको देस हो/ यो भन्दा बढी भन्नु पर्दैन कुनियति भारतलाई/